Ukuthi Ukusingathwa Kwakho Kungayithinta Kanjani I-SEO Yakho | Martech Zone
Ukuthi Ukusingathwa Kwakho Kungayithinta Kanjani I-SEO Yakho
NgoLwesithathu, Septemba 6, 2017 NgoLwesithathu, Septemba 6, 2017 Douglas Karr
Yebo, ukusingathwa kwakho kungaba nomthelela ku-SEO yakho. Umangele? Banjalo abantu abaningi lapho befunda ukuthi uhlelo lwabo lokusingathwa lungathinta amandla abo okufinyelela kuma-SERP aphezulu. Kodwa kungani? Futhi kanjani?
Kuyavela ukuthi uhlelo lwakho lokusingathwa luthinta izindawo ezintathu ezinkulu ezithinta amazinga akho: Ukuphepha, Indawo, nejubane. Sizokunikeza ukuphazamiseka okuphelele hhayi nje ukuthi uhlelo lwakho lokubamba luthinta kanjani lezi zinto, kodwa nokuthi yini ongayenza ukukhetha ukusingathwa okuhle kakhulu ezilalelini zakho, nokuthi ungazinciphisa kanjani izinto eziyinkinga uma uhlangabezana nazo.
Ukusingathwa Plan Yakho Ukusingathwa
Ukuphepha kungenye yezinkinga eziyisisekelo okufanele ukhathazeke ngazo uma usebenzisa iwebhusayithi, noma ngabe wenza imisebenzi ye-SEO noma cha! Futhi umthetho oyisisekelo wesithupha yilokhu: uma iwebhusayithi yakho ivikeleke kancane, maningi amathuba okuthi ungene ngobugebengu. Futhi uma kwenzeka ugencwa, kungenzeka ukuthi okuqukethwe kwakho kungashintshwa ngendlela yokuthi ulahlekelwe yizikhundla ozitholile.
Ngakho-ke, ngenkathi ukuphepha okuncane kungasho ukuthi iwebhusayithi yakho izoba nenkinga yokuthola amazinga, kusho ukuthi ubungozi bakho ukulahlekelwa amazinga ekugcineni aphezulu. Ngalesi sizathu, into yokuqala okufanele uhlolisise noma yimuphi umhlinzeki wokusingathwa ukuphepha kwabo. Ingabe banikela ngezokuphepha ezigoqelwe entengweni yabo? Ingabe bayawaqapha amafayela akho? Ngenye indlela, ingabe banikela ngokuphepha okwengeziwe ngemali ekhokhwayo eyengeziwe? Ngabe bangakusiza uma iwebhusayithi yakho igqekeziwe? Kala okuguquguqukayo okuningi ngangokunokwenzeka ngaphambi kokuzivalela kunoma iyiphi iphakheji ethile yokubamba.
Uma uhlelo lwakho lokubamba lungakunikeli ukuphepha kwalo okungeziwe futhi usuvele ungene ngaphakathi, hlala njalo ezithile kuya vikela iwebhusayithi yakho ngokumelene nabaduni ngangokunokwenzeka. Ukungeza ama-plugins okuphepha, ukudala amaphasiwedi aphephile, nokusebenzisa izindlela zokuphepha ezinengqondo kungasiza ekunciphiseni izingozi.
Indawo Yakho Yokubamba Uhlelo Lokubamba
Lapho uthenga ukusingathwa, uthenga indawo ebonakalayo kuseva yenkampani. Futhi iwebhusayithi yakho izokleliswa kangcono (noma kubi) kubabukeli bakho oqondiswe kubo ngokususelwa endaweni yaleyo seva. Isibonelo, uma ufuna ukukhomba izinkulungwane zeminyaka zaseJalimane ezithanda ukupheka, uzobona imiphumela engcono emiphumeleni yokucinga yaseJalimane uma ukusingathwa kwakho kune-eurozone (noma okungcono, isiJalimane) indawo ebonakalayo.
Lo mthetho wesithupha uvame ukuqiniswa ezingeni lezwe emhlabeni wonke. Ngeshwa, izinkampani eziningi ezibamba kuphela zinezikhungo zedatha emadolobheni athile athile. Ingabe basemazweni noma ezindaweni ezibanzi zomhlaba wezithameli zakho? Umphumela ungahle ube mncane ngokuhamba kwesikhathi, futhi ngokuqinisekile ungabaluleki noma ube nesisindo njengokuthola izihloko zamakhasi ezilungiselelwe kahle: kepha enza yenza umehluko.
Uma ufuna ukunciphisa umphumela wewebhusayithi ebanjelwe endaweni ehluke kakhulu kunezithameli zakho ezihlosiwe, ungazama ukunqoba lokho ngokungeza imininingwane yendawo kanye nemininingwane eqondene nendawo ezinyaweni zewebhusayithi yakho, amakhasi, nokunye umbhalo obalulekile ohlobene ne-SEO. Ukungeza amamephu e-google kuwebhusayithi yakho okukhomba izindawo eziseduze nezithameli zakho okuqondiwe nakho kuwumqondo omuhle!
Ijubane Lomhlinzeki Wakho Wokubamba
Isivinini somhlinzeki wakho wokusingathwa sibopha kakhulu endaweni: ukusondelana kwesiphakeli sakho kusendaweni ebonakalayo kumsebenzisi wokugcina odonsa iwebhusayithi yakho, ngokujwayelekile, ziyashesha izikhathi zabo zokulayisha. Kepha lokho kuyinto eyodwa kuphela encane yejubane lokusingathwa elingathinta isikhundla sakho ekusesheni kwe-google.
Enye into ethinta isivinini yiprosesa yeseva, nokuthi ingakanani i-bandwidth ne-RAM iwebhusayithi yakho eyabelwe. Ngalesi sizathu, ukusingathwa okuzinikele ngokuvamile ngokushesha ukwedlula ukusingathwa okwabiwe. Kuyaqapheleka ukuthi lapho izivakashi nezethrafikhi yakho ithola okuningi, isikhala esizodingeka kakhulu kuseva: ngakho-ke ukwazi ukwandisa njengoba kudingeka kunokuba uvinjelwe engxenyeni encane yeseva eyabiwe noma ngabe iwebhusayithi yakho ingakanani ukuthola kubaluleke kakhulu.
Uma usafuna ukusingathwa, ukunaka lezi zinto kungasiza ukunika iwebhusayithi yakho umlenze olula lapho i-SEO ikhathazekile khona. Ukuthatha iphakethe lokubamba elifanele kungagcwalisa konke ukuphepha kwakho, indawo, nesivinini sakho okudingeka uqiniseke ukuthi awuqali kusimo esibi. Kepha kubalulekile ukubeka lokhu ngombono: izinto ezinkulu ezithinta i-SEO yewebhusayithi yakho zizohlala ziyizakhi zayo ezisendaweni.
Tags: uhlelo lokusingathaukusingathwa kohlelo lokuphathaisivinini somhlinzeki wokubambaKanjaniisivinini sithinta kanjani lokhoukusebenzisa ngokugcwele injiniseoisivinini se-seoindawo yesevaisivinini seoweb ukusingathwa
Ukuhlela izibonisi ze-imeyili ku-OSX Kulula Ngokunamathiswa Kokuqukethwe